MDC Yonetsekana neZviri Kuitwa Nhengo Dzayo neZanu PF
Mashoko atatambira anoti imwe nhengo yeMDC, VaTonderai Ndira, vanonzi vapambwa mambakwedza nevanhu vanodarika gumi vanga vakapakatira zvombo uye vakavhara misoro yavo. Hapana ari kuziva kuti VaNdira varipi pari zvino.
Vaona zvichiitika vanoti VaNdira vangotorwa vasina kunyatsopfeka zvakanaka. Vapamba VaNdira vanonzi vanga vaine motokari chena yerudzi rweToyota Virgo ine nhamba dzinoti 772 224 P.
Bato reMDC rinoti raziviswa nezvekupambwa kwaVaNdira. Zvichakadaro, bato reMDC rinoti raziviswawo nemapurisa kuti nhengo yaro, VaBetter Chakururama, vakawanikwa vakapondwa kwaMurehwa nemusi weSvondo.
VaChakururama vanonzi vakawanikwa vaine mavanga anoratidza kuti vakaita zvekupondwa vachibayiwa bayiwa. VaChakururama vakapedza mwedzi yakawanda vari muhusungwa gore rapera.
Munyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa mudunhu reMashonaland East mubato reMDC, VaPiniel Denga, vaudza Jonga Kandemiiri weStudio 7 kuti vaChakururama vakambopambwa vakarohwa zvakaipisisa masvondo matatu apfuura, vakazowanikwa vakakandwa kuMutorashanga.
Mune imwewo nyaya, sangano reZimbabwe Election Support Network, ZESN, rinoti vashandi varo vaviri vakapambwa nevatsigiri veZanu PF kuKotwa, kuMudzi, nemusi weMuvhuro.
National Director weZESN, Amai Rindai Chipfunde-Vava, vaudza Jonga Kandemiiri weStudio 7 kuti sangano ravo pari zvino riri kuzama kuti ridzoserwe motokari yaro, iyo yakabvutwa nevakanga vapamba vashandi vavo.
Dzimwe Nhau Kubva kuStudio 7 ...